Mitendry Hira Klasika eo Anivon’ny Toeram-Pako Ho Endri-Panoherana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2016 9:38 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, বাংলা, Italiano, Français, 日本語, عربي, srpski, polski, 繁體中文, 简体中文, English
Kaonseritra mozika klasika ao amin'ny fanatobiam-pako tsy ara-dalànan'i Tetovo, Makedonia. Saripikan'i Ngadhnjim Mehmeti, EcoGuerilla.mk, nahazoana alalana.
Ao amin'ny fitafy fianjaika rehefa manao kaonseritra, manao tapin'orona hiarovana amin'ny hasison'ny fahalovana ireo mpitendry mozika klasika anankiroa avy ao Tetovo no milalao ny hiran'orikesitra malazan'i Bach mitondra ny lohateny hoe “Air” [rivotra] ho fanoherana ny fandotoana.
Teo amin'ny toeram-panariam-pako tsy ara-dalàna eo amin'ny fidiran'ny tanànan-dry zareo ao Tetovo, tanàna lehibe indrindra ao andrefan'i Makedonia, sady iray amin'ireo tanàna tratran'ny fandotoana indrindra ao Eoropa ry zareo. Misy aza moa ny miteny fa ity no toerana an-tanandehibe voaloto indrindra eto amin'izao tontolo izao.
Ny hetsi-panoherana dia nokarakarain'ny fikambanana Eco Guerilla, izay nampiasa lahatsary iray notontosaina tamin'ilay kaoseritra-hetsipanoherana ho fitaovam-piasana amin'ny fikatrohana nomerika. Niely haingana dia haingana tany amin'ny sehatra isan-karazany ny lahatsary, nisarika nankany amin'ilay olana.
Ny tsy fihetsehan'ny governemanta tamin'ity raharaha ity no nitarika nankany amin'ny fisian'ireo hetsi-panoherana tao an-tanàna sy tany an-drenivohitra Skopje [mg].
Kasinga mampisy ny fandotoana tao Tetovo ny tsy fisian'ny fanatatavanana eo akaikin'ny toeram-pandrendreham-by Jugohrom, ny fanafarana fiara lany andro avy any amin'ny Vondrona Eoropeana, ny fampiakarana ny fampiasana kitay ho famanàna, ary ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasam-panangonam-pako, ka manery ny olona hametraka ny fakony eny amin'ny fanariam-pako tsy ara-dalàna. Notontosaina teo amin'ny toeram-panariam-pako lehibe indrindra ao an-tanàna izay tsy noraharahian'ny manampahefana taona maro ny kaonseritra. Eo am-pidirana ny tanàna no misy azy ity, eo anilan'ny fitehirizana ambioka (hita an-damosina ao amin'ny lahatsary).
Tamin'ny fanambarana ho an'ny Global Voices i Arianit Xhaferi solontenan'ny Eco Guerrila no nanazava:
Efa ela no nisy ity fanatobiam-pako eo am-pidirana ny tanàna ity. Nampanantena ny hanaisotra azy ity ny Ben'ny Tanàna ankehitriny, Rtoa Teuta Arifi, nandritra ny fanentanana fifidianana tamin'ny 2013. Nampanatena ny hamaha ny olana haingana sy amim-pahombiazana izy. Mbola eo ny fanatobiam-pako, mandraka androany, miasa ho toy ny marika TONGASOA ETO TETOVO, ary miasa ho foiben'ny henatra ho antsika.
Efa elaela ihany izay i Tetovo no tafiditra ao anatin'ny lisitry ny tanàna voaloto indrindra eto ambonin'ny tany. Eo ankilan'ny Jugohrom, izay fototra voalohany iavian'ny fandotoana eo amin'ny faritra, dia mandoto ny tanàna ihany koa ilay fanatobiam-pako, mahatonga ny fielezan'ny aretina sy fery isan-karazany.
Isaky ny volana Oktobra, nanampy ny fetiben'ny poezia antsoina hoe “Ditët e Naimit,” (“Ny Andron'i Naim,” ho fanomezam-boninahitra an'ilay poeta Albaniana Naim Frashëri) ny fiadidiana ny tanànan'i Tetovo. Nokendren'ny mpikarakara ny hetsika ho karazana antenantenam-potoana ho amin'io fetibe io ilay kaonseritra fanoherana, “raha heverina hamangy an'i Tetovo ny artista sy mpitia zavakanto maro.”